ဝိတိုရိယ နံရံစာ | Climb O'Clock
← နံပြားဖို တစ်ခုအကြောင်း
ခါကာဘို ရဲ့ သဘာဝခေါ်သံကို နားဆင်ဖို့ →
Posted on July 21, 2014	by climberdoelone
Lovely ခေါ နုသုမ် ကျွဲချိုခေါင်ရေ ရီဝေ ချင်းက New Year ည ဝိုင်းပတ် ဒူဝေ ဒို့တတွေ 2003 1st Jan BLG (၂၀၀၃ ဇန်နဝါရီ ၁) my favorite poem by ဆြာ ဗလLin Htet Aung(@)အေးစခန်း ဘိုတဲ Photo by Ko Poan Gyee……..
ဝိတိုရိယ တောင်ကို တက်တဲ့ လမ်းခရီးမှာ အေးစခန်း ဆိုတဲ့ ဗိုလ်တဲလေးရှိပါတယ်
မင်းတပ် ဝိတိုရိယ လမ်းကြောင်းပေါ်က အေးရွာမှာ ရှိ ပါတယ်
အေး စခန်း ဗိုလ်တဲ မှာ နံရံစာတွေ အများကြီးရှိပါတယ် အဲ့ဒီအထဲကမှ မှတ်မှတ်ရရ နှစ်သက်မိတဲ့ ( correction pen နဲ့ ရေးတဲ့) နံရံစာလေးတွေရှိပါတယ်
တခုကတော့ ဆရာ ဗလ ရေးတဲ့ ပုံပါ ကဗျာလေးပါ
Lovely ခေါ နုသုမ်
New Year ည
ဝိုင်းပတ် ဒူဝေ ဒို့တတွေ
နောက်တခုကတော့ ဗိုလ်ကာတွန်း ( ကိုချွန်းချွန်း) ရေးခဲ့တဲ့
” ကျွန်တော် လွင်မိုးအိမ်သွားသည်” ဆိုတာလေးပါ
( ဝိတိုရိယတောင် နတ်မတောင် ခေါနူးစုံ(မ)တောင်ဆိုပြီး လူသိများလာစေတဲ့ လွင်မိုး က “လွင်မိုးခရီးသွားနေသည်” ဆိုပြီး သူ့ခရီးတုံးကရေးထားခဲ့ပါတယ် )
လွင်မိုးရဲ့ စာနဲ့ အနီးမှာ ရေးထားတာပါ ……စပ်ဆက်တွေးကြည့်ကြပေါ့ဗျာ ဟဲဟဲ
နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုလှမင်း(Aaron) ရဲ့ “My Victoria” ကဗျာလေးပါ
My Victoria !
OR WHEREVER I AM
NOW, I’m here for the SECOND
I promise, I’ll be there again, and AGAIN
BECAUSE, I LOVE YOUR BEAUTY OF NATURE.
နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုလှမင်း(Aaron) ရဲ့ “My Victoria” ကဗျာလေးပါ My Victoria ! SOMEDAY SOMETIME SOMEWHERE OR WHEREVER I AM I’ll be REMEMBERING YOU NOW, I’m here for the SECOND I promise, I’ll be there again, and AGAIN BECAUSE, I LOVE YOUR BEAUTY OF NATURE.
( ခုတော့ ဒီ ဘိုတဲဟောင်းက မရှိတော့ဘူးတဲ့ ) ……..
ဘိုတဲဟောင်းနံရံ ပျဉ်ပြား အနှံ့မှာ correction pen နံရံစာတွေရှိပါတယ် ၊……….
ရောက်သွားရင် လိုက်ဖတ်ရတာလည်းပျော်စရာကောင်းပါတယ် ၊
………. သူငယ်ချင်းတွေ ရေးထားတဲ့ ကျွန်တော့နာမည်လည်း ရှိပါတယ် ……….၊ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ အများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ နေရာ အများပိုင် ပစ္စည်းလို့ သဘောထားတဲ့အတွက်မရေးခဲ့ပါဘူး
(စာကြွင်း- ဝိတိုရိယ တောင်ကို တက်တဲ့ အဓိကလမ်းကြောင်း နှစ်ခုရှိပါတယ် ကန်ပက်လက် ဖက်ကနေ တက်ရင် ကား ဆိုင်ကယ် စတာတွေ လမ်းပေါက်လို့ တောင်ထိပ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရောက်နိုင်ပါတယ် ” မင်းတပ် -အေးစခန်း- တောင်ထိပ် ” ကတော့ ခြေလျင်ခရီးလမ်းကြောင်းပါ )
This entry was posted in Environmental, Essay, Fact, History, Memorial, Myanmar, Poem and tagged Aye Village, Mt.Victoria Chin State. Bookmark the permalink.